🥇 ▷ MediaMarkt waxay kudartaa taleefan casriga ah ama kiniin bilaash ah ✅
MediaMarkt waxay kudartaa taleefan casriga ah ama kiniin bilaash ah
Huawei P30 Pro wuxuu suuqa joogay dhowr bilood ka dib markii uu la kulmay hoos u dhac qiimo dhimis ah. Hadalka Mareykanka ma ahan mid si sax ah u caawinaaya xasilloonida qiimaha. Macaamiisha xiiseyneysa, tani waxay keenaysaa dalabyo wanaagsan.
Huawei P30 Pro ee qiimaha hoos u dhaca: Kiniiniga ama telefoonka casriga ah si sidaas loo sameeyo
Huawei P30 Pro waxaa lagu soo bandhigay bilowga Abriil 2019 gudaha Jarmalka qiimaha 999 euro. Waxaa lagu tilmaamaa “yaabka kamaradaha” – oo runtiina kamarad saddex-gees ah sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha sare ee lagu soo qaatay taleefankaan casriga ah. Tan iyo markii Mareykanku u higgaadinayo qiimaha si joogto ah ayuu u hooseeyaa. Ganacsadayaashu waxay u baahan yihiin inay la yimaadaan wax kor u qaadaya xiisaha macaamiisha iman kara. Sidoo kale MediaMarkt. Intii lagu guda jiray kor u qaadista buugga buugaagta ‘P30 Pro’ ee 679 yuuro casriga ama kaniiniga oo bilaash ah.
Natiijooyinka xisaabinta soo socota:
Huawei P30 Pro (qiimaha 639 euro) + Huawei P Smart 2019 (qiimaha 154 euro) oo gaaraya 679 euro (wadarta qiimaha 793 euro)
Huawei P30 Pro (qiimaha 639 euro) + Huawei MediaPad T5 (qiime dhan 170 euro) oo ah 679 euro (wadarta qiimaha 809 euro)
Si aad uga qeybgasho ololaha, kaliya u gudub bogga gaarka ah ee MediaMarkt, ku dar P30 Pro iyo taleefanka gacanta ama kaniiniga casriga ah gaarigaaga. Qiimaha aaladda labaad ayaa si toos ah looga goyn doonaa. Marka waxaad bixineysaa 679 euro labada badeecadoodba.
Labada xaaladoodba, waxaad ku bixineysaa wax kayar 100 euro wax kayar jaangooyooyin ka badan kuwa tafaariiqda kale, haddii aad iibsato Huawei P30 Pro oo hadda ku yaal MediaMarkt. Waxay kuxirantahay inaad ubaahantahay casriga labaad ama kaniiniga Android. Dhamaan aaladaha Huawei ee halkaan lagu iibiyo wali waxay helayaan cusbooneysiin waxaana lagu soo dejisan karaa marinka Google Play Store. Marka ma aha inaad ka walwasho taas.
Huawei P30 Pro: Maxaa ka dhigaya casriga casriga si gaar ah?
Huawei P30 Pro waa mid ka mid ah telefoonada gacanta ee ugu fiican suuqa. Waxay leedahay kamarad aad u fiican, waxqabadka wanaagsan, nolosha batteriga dheer iyo naqshad wanaagsan. Waa inaad goyn ka dhigtaa faahfaahinta. Ma jiro cod istcimaal ah, soo bandhiggu wuxuu ku xalliyaa oo keliya FHD + mana jiro isku xirnaanta jaakadaha. Faahfaahinta kale oo dhan waxaa laga heli karaa baaritaanka Huawei P30 Pro.
Huawei P30 Pro: iibsigu ma yahay mid hadda ku habboon?
Iibsashada ayaa u qalma qof kasta oo garanaya xaalada hadda jirta xayiraadda Mareykanka ee Huawei oo raadineysa taleefan gacmeed weyn oo Android ah. Qof kasta oo kale waa inuu eegaa hareeraha tartanka.